Greater Miami Convention & Visitors Bureau dia nanambara ny filoha vaovao sy ny tale jeneraly
Home » Lahatsoratra farany farany » Associations News » Greater Miami Convention & Visitors Bureau dia nanambara ny filoha vaovao sy ny tale jeneraly
Associations News • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Karaiba • Hospitality Industry • Vaovao • People • Tourism • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
David Whitaker dia notendrena ho Filoham-pirenena & Tale jeneralin'ny fikambanana marketing ho any Greater Miami sy Miami Beach.
Ny fanendrena dia mody ho an'i Whitaker izay efa mpikambana tao amin'ny ekipa GMCVB nandritra ny 17 taona.
Whitaker dia nandao an'i Miami tamin'ny voalohany tamin'ny 2007 noho ny fanendrena ny andraikitry ny Filoha & Tale jeneralin'ny fizahan-tany any Toronto.
Nandritra izay dimy taona lasa izay, Whitaker dia efa filoham-pirenena & Tale jeneralin'ny Select Chicago, DMO ho an'i Chicago.
The Birao fivoriambe sy mpitsidika marobe any Miami (GMCVB) nanambara androany fa i David Whitaker dia notendrena ho Filoham-pirenena & Tale Jeneralin'ny fikambanana marketing ho any ho any (DMO) ho an'ny Greater Miami sy Miami Beach. Ny fanendrena dia fiverenana an-trano ho an'i Whitaker izay niasa ho mpikambana ao amin'ny ekipa GMCVB nandritra ny 17 taona (1990 - 2007), izay vao ny ela indrindra dia ny filoha lefitra mpanatanteraka & Chief Marketing Officer. Dimy taona talohan'io dia niasa tamin'ny ekipa mpanatanteraka ny United Way of Miami-Dade izy.
Nandeha i Whitaker Miami voalohany tamin'ny 2007 noho ny fanendrena ny andraikitry ny Filoha & Tale jeneralin'ny fizahan-tany any Toronto (fantatra ankehitriny amin'ny hoe Destination Toronto), ny DMO ho an'i Toronto, izay nitarihany ny fikambanana nandritra ny valo taona. Nandritra ny fotoana nitondrany tany Toronto dia nifidy ny fivoriambe ambony tany Amerika Avaratra sy ny biraon'ny mpitsidika ary ny foiben-toeran'ny mpitsidika tamin'ny fitsapan-kevitry ny mpikarakara fivoriana 650 mahery. Whitaker dia nitarika tolo-kevitra mahomby hampiantrano lalao NBA All-Star Game sy Pan American / Parapan American Game.
Tamin'ny famaranana ny fotoana nitondrany tany Toronto sy tao anatin'izay dimy taona lasa izay, Whitaker dia efa filoham-pirenena & CEO an'ny Choose Chicago, DMO ho an'ny Chicago. Nandritra ny fotoana nitondrany tany Chicago dia nanana andraikitra tamin'ny fampiroboroboana sy fivarotana ny ivon-toeran'ny fivoriambe lehibe indrindra tany Etazonia izy, dia i McCormick Place. Teo ambany fitarihany, ny DMO dia niasa tamim-pahombiazana ary nampiantrano ny lalao NBA All-Star, lalao MLS All-Star, ny fifaninanana tenisy iraisam-pirenena voalohany an'ny La North Cup, ny NCAA Frozen Four, ary ny lalao baolina kitra sy rugby iraisam-pirenena maro. Chicago, amin'ny maha toerana itodiana azy, dia voafidy tamin'ny fitsapan-kevibahoaka mpamaky mahay ny CondéNast Traveller Readers' Choice Awards ho toy ny “Best Big City” hitsidika mandritra ny efa-taona misesy (2017 - 2020), izay nitranga teo ambany fitarihan'i Whitaker.
"David dia mamerina aty amintsika fitambarana tsy fahita firy sy mahery - loharanom-pahalalana sy fahalalana tsy manam-paharoa eo amin'ny fiaraha-monina misy antsika, miaraka amina tontolon'ny traikefa azo avy amin'ny fampiroboroboana ny roa amin'ireo marika amerikana avaratra sy manerantany any Chicago sy Toronto," hoy ny GMCVB Filoha Bruce Orosz. "Ity fampifangaroana ity, indrindra ireo tanàna roa notarihiny tamim-pahamendrehana ho fivorian'ny fivoriambe, dia hanampy ny indostrian'ny fandraisam-bahiny sy ireo mpiara-miombon'antoka amintsika hitondra an'i Greater Miami sy Miami Beach amin'ny dingana manaraka. "Nahita fahombiazana lehibe ihany koa i David tamin'ny fampiroboroboana ireo vondrom-piarahamonina isan-karazany ary naneho fientanam-po mahery vaika tamin'ny fampiroboroboana ny fahasamihafana, ny fitoviana ary ny fampidirana".
Whitaker dia voafantina tamin'ny famaranana ny fikarohana nasionaly feno enim-bolana notontosain'ny komity mpikaroka manokana 14-mpikambana izay misy ny mpandraharaha eo an-toerana sy ny mpitarika ny vondrom-piarahamonina izay manome taratra ny fahasamihafana ara-poko, ara-pirazanana, miralenta ary fironana ara-nofo ao Miami-Dade County toy ny fahasamihafan'ny fikambanana sy indostria sasany ao amin'ny County Miami-Dade, indrindra ny indostrian'ny fandraisam-bahiny. Ny komity mpikaroka dia nanoro hevitra an'i Mike Gamble, Lehiben'ny Executive Executive ao amin'ny SearchWide Global, ilay orinasam-pikarohana manampahefana malaza indrindra izay mandrakotra ny habaka DMO sy Jaret Davis, tompon'andraikitra mpitantana mpiara-miasa ao Greenberg Traurig, mpanolotsaina any ivelany efa ela an'ny GMCVB. Ny komity mpikaroka dia nandidy ny fikarohana feno an'ireo mpilatsaka hofidina rehetra, na eo an-toerana izany na eo amin'ny sehatra nasionaly, amin'ny fiheverana ny toetra mampiavaka an'i Miami ho toerana iray. Ny komity mpikaroka dia nandidy ihany koa fa ny vato fisaka dia hita taratra ny fahasamihafan'ny harena an-tsokosoko ao Miami-Dade County, ary niafara tamin'ny fametraham-panadinadinana tamin'ny voalohany, ny 75% amin'izy ireo dia tsy mitovy amin'ny fomba fijerin'ny lahy sy ny vavy, ny foko ary ny LGBTQ ary ny 25% izay misy afrikanina-amerikanina. fanehoana. Ny resadresaka tamin'ny fihodinana faharoa dia nahitana kandidà 50% isan-karazany avy amin'ny fomba fijery miralenta, foko ary LGBTQ, ny 25% dia ny solontena afrikanina amerikana. Raha atotaly, ny vondrona, ampian'ny SearchWide Global, dia nanontany na nahatratra mihoatra ny 125 ny mpifaninana mety ho avy amin'ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana, manerana ny firenena sy iraisam-pirenena, ary nanao fihaonana mivantana tamin'ny kandidà valo tamin'ny fihodinana voalohany ary kandidà efatra tamin'ny ny fihodinana faharoa.